Izesekeli ze-Fiber Optical Abenzi & Abahlinzeki | China Fibre Optical Izesekeli Factory
I-FC Fiber Optical Pigtail
Ama-pigtails e-fiber optic ahlinzeka ngendlela esheshayo yokwenza amadivayisi wokuxhumana ensimini. Zenzelwe, zenziwe futhi zahlolwa ngokuya ngomthetho olandelwayo nokusebenza okushiwo ngamazinga ezimboni, azohlangabezana nokucaciswa okuqinile kwemishini nokusebenza. Isici 1. Umkhiqizo usebenzisa izikhonkwane ze-ceramic ezingenisiwe futhi ungenisa izintambo ezisezingeni eliphakeme ze-fiber optic. 2. Yethula ubuchwepheshe bokugaya obuthuthukisiwe bangaphandle nemishini yokugaya ukuqinisekisa ukuphambuka kokumaphakathi kwe-fibe ...
I-LC Fibre Optic Pigtail
Ama-pigtails e-fiber optic ahlinzeka ngendlela esheshayo yokwenza amadivayisi wokuxhumana ensimini. Zenzelwe, zenziwe futhi zahlolwa ngokuya ngomthetho olandelwayo nokusebenza okushiwo ngamazinga ezimboni, azohlangabezana nokucaciswa okuqinile kwemishini nokusebenza. Isixhumi Sokucaciswa Isixhumi se-LC B Imodi Ye-Fibre Engafakwanga 9 / 125μm Uhlobo Lwe-Fibre I-Simplex Polish APC Ikhebula Ububanzi 0.9mm Ijakhethi Izinto I-PVC Jacket Umbala we-Wavelength 1310nm / 1550nm Ukuqina> ...
Ama-pigtails e-fiber optic ahlinzeka ngendlela esheshayo yokwenza amadivayisi wokuxhumana ensimini. Zenzelwe, zenziwe futhi zahlolwa ngokuya ngomthetho olandelwayo nokusebenza okushiwo ngamazinga ezimboni, azohlangabezana nokucaciswa okuqinile kwemishini nokusebenza. Incazelo Isixhumi Uhlobo FC IsiPolish Uhlobo UPC / APC Fibre Imodi OS2 9 / 125μm Wavelength 1310 / 1550nm Fibre Bala Simplex Fibre Ibanga G.652.D / G.657.A1 Ukufaka Ukulahleka ≤0.3dB Buyisela Ukulahlekelwa UPC≥50dB, APC-60dB Atte ...
Le ST Single Mode Patch Cord ingesinye sezixhumi zochungechunge lwe-MT. Ama-ferrules ochungechunge asebenzisa izimbobo ezimbili zomhlahlandlela ezinobubanzi ebusweni bokugcina be-ferrule kanye nephini yomhlahlandlela woxhumano oluqondile. Ngaphezu kwalokho, kungacutshungulwa ukukhiqiza izinhlobo ezahlukahlukene zama-jumpers. Umklamo ohlangene wesixhumi uvumela i-jumper ukuba nenombolo enkulu yama-cores nosayizi omncane. Ngakolunye uhlangothi, le ST Single Mode Patch Cord ingasetshenziswa kabanzi ezindaweni zomugqa ezihlanganisiwe ze-fiber-optic ...
Imodi eyodwa eya ku-Multimode Fibre Patch Cord
Le modi eyodwa eya ku-multimode fiber patch cord yenzelwe ngokukhethekile ukwenza izintambo zokubamba kusuka kudivayisi kuye kusixhumanisi se-fiber optic cabling. Lesi sendlalelo esivimba kakhulu sisetshenziselwa ukuxhumana phakathi kwe-transceiver ebonakalayo nebhokisi lokugcina. Uma kuqhathaniswa nentambo ejwayelekile emakethe, imodi yethu eyodwa ku-multimode fiber patch cord ifakwe inzuzo yokuphindeka okuhle, ukusebenza okuhle kwe-inter-plug nokuqina okuhle kwezinga lokushisa. Ngakolunye uhlangothi, futhi kuyasebenza ...
SC ukuze SC Single Mode Patch Cord
Le SC to SC single mode patch cord inezimbobo ezimbili zomhlahlandlela ezinobubanzi ebusweni be-ferrule kanye nephini yomhlahlandlela yokuxhumana okuqondile. Kulula impela ukufakwa futhi asikho isidingo esikhethekile sokugcinwa. Ngaphezu kwalokho, kungacutshungulwa ukukhiqiza izinhlobo ezahlukahlukene zama-jumper we-MPO. Ifakwe inqubo ethuthukile, i-SC yethu ku-SC single mode patch cord ingasetshenziswa kabanzi ezindaweni zomugqa ezihlanganisiwe ze-fiber-optic enqubeni yezintambo, ukuqinisekisa ukusebenza kwejubane eliphezulu. O ...
SC ukuze LC Single Mode Patch Cord
Le SC to LC single mode patch cord ixhunywe ohlelweni lokudlulisa lwe-optical, olubona umsebenzi wokuxhumana ngokuhlangana kwe-optical, futhi akukho lutho kufomethi yokufaka ikhodi yesiginali. Uma kuqhathaniswa nentambo ejwayelekile emakethe, i-SC yethu ku-LC single mode patch cord inezinzuzo zokuhlinzeka ngokudluliswa kwedatha ye-lat-low latency kanye nokusekela i-voltage ebanzi yokuphakelwa kwamandla kagesi. Ifakwe ukuvikelwa kwamandla okuhle kakhulu nokushintsha okuzenzakalelayo, isekela i-ult ...
MTRJ ukuze MTRJ Fibre optic Patch Cord
Le MTRJ eya kwi-MTRJ Patch Cord ifakwe ukwakheka okuvikelayo, okuqaphela umsebenzi ukuvimbela ukulimala kwendawo ezungezile ku-fiber optical, njengamanzi, umlilo, ukushaqeka kukagesi, njll. Isikhungo ingumongo wengilazi odlulisa ukukhanya. Kwi-fiber multimode, ingqikithi inebubanzi, obucishe bulingane nobukhulu bezinwele zomuntu. I-single-mode fiber core inobubanzi. Ingaphandle lomgogodla lizungezwe imvilophu yengilazi enenkomba engezansi ye ...
LC ukuze LC Single Mode Fibre Patch Cord
Le LC to LC single mode fiber patch cord ingaba indawo ekahle yokuxhuma ifreyimu yokusabalalisa i-fiber fiber kanye nesokhethi yolwazi lwe-optical kuswishi, ukuxhumana phakathi kwamashintshi, ukuxhumana phakathi kweswishi nekhompyutha, nokuxhumana phakathi isokhethi lemininingwane ebonakalayo kanye nekhompyutha. Ifakwe ukusebenza okuphezulu, i-LC yethu ku-LC imodi eyodwa ye-fiber patch cord ingasetshenziswa ku-subsystem yokuphatha. Ngenxa yobukhulu obufanele nesisindo esincane, ...
LC Single Mode Fibre Umthambo Patch Cord
Le LC Single Mode Patch Cord ilungele ikakhulukazi izindawo eziphakeme zokuminyana. Uma kuqhathaniswa nentambo ejwayelekile emakethe, le ntambo ifakwe isixhumi esincanyana kakhulu, esigcina isikhala esiningi uma siqhathaniswa ne-jumper yekhebula ejwayelekile ngaphandle kokuthinta ukudonsa. Futhi umgogodla wesixhumi omncane ufushane kune-LC ejwayelekile yesixhumi somsila, osindisa isikhala esiningi sokuphathwa kwekhabethe. Ngenxa yokusebenza okuphezulu, i-LC Single Mode Patch Cord yethu inesifushane ...
I-FC Single Mode Patch Cord
Ihlangana ne-EIA / TIA 604-2 nge-ceramic ferrule yamanethiwekhi we-cabling asheshayo. · Ikhebula eliphrintiwe lisiza ukucacisa nokwazi izintambo ezahlukahlukene. · I-Zirconia Ceramic Ferrule Optimum IL ne-RL. · Ikhebula le-fiber elingazweli libonisa ukusebenza okuhle ekuqiniseni. · K = K ibhokisi lephakethe lihlinzeka ngokuvikelwa okuphezulu ezintweni zakho. Incazelo Isixhumi FC to FC Jacket OD 1.6 / 1.8 / 2.0 / 3.0mm Fibre Mode 9 / 125μm Jacket Colour Yellow Polishing APC to APC Jacket Material PVC (OFNR), OFN ...